Meksika: Veloma Farany Avy Amin’ny Fo Ho An’ilay Mpihira Mpamoron-kira Juan Gabriel, ‘Ilay Mpanjakan’i Juárez’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2016 15:51 GMT
Juan Gabriel tanaty fampisehoana, Septambra 2014. Sary navoaka miaraka amin'ny lisansa Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).
“Ary tao amin'ny Bellas Artes, manao ny tsy azony nihodivirana i Juan Gabriel: ny Desplante,” hoy ny nosoratan'ilay Meksikana mpanao gazety, Carlos Monsiváis, ny taona 1990, ho an'ny gazetiboky Proceso, milaza ny mpanjakan'ny hira mihetsiketsika, Juan Gabriel, nanao ny iray amin'ireo dihiny malaza tao amin'ny ivontoerana koltoraly Palacio de Bellas Artes. “Ny hetsiky ny soroka mikomy, ny faandalinana-fibabohan'ireo olo-malaza, ny fahaiza-mitondra tenan'ny olona iray izay lasa malaza ao anatin'ireo fihomehezana ny voaheloka.”
Tao anatin'ny tehaka, ranomaso ary fihirana, nanome ny fanajana farany azy tao amin'ilay Palacio de Bellas Artes, ny 5 sy 6 Septambra, irao mpankafy an'i Juan Gabriel, iray amin'ireo mpanakanto be mpitia sy malaza indrindra ao Meksika. Juan Gabriel, izay nanao ny asany tao anatin'ny fankahàrana ireo fenitra sosialy ifanekena, dia maty ny 28 Aogositra, tany Santa Monica, Kalifornia, noho ny fahatapahan'ny lalan-drà, roa andro monja taorian'ny nanaovany fampisehoana tany amin'ny tanànan'i Los Angeles.
Nafindra avy tany Ciudad Juárez , ilay tanàna any an-sisintany nahalehibe azy, ho ao amin'ny ivontoerana koltoralin'ny Tanànan'i Meksika, izay nampisehoana tao amin'ny efitrano malalaka, ny lavenon'ilay mpihira sady mpamoron-kira malaza anà mozika Meksikana mihetsiketsika.
Dikan-tsarin'ny fanomezam-boninahitra mitohy navoakan'ny fandaharan'ny Sekreteran'ny Kolontsainan'i Meksika.
Lasa iray amin'ireo toerana tena mety hanomezam-boninahitra ireo olo-malaza Meksikàna ny Palacio de Bellas Artes. Nandritra ireo taona nifandimby, nomena voninahitra tao i Frida Kahlo, Diego Rivera, Mario Moreno “Cantinflas”, Chavela Vargas, Carlos Monsiváis ary Gabriel García Márquez.
Raha nanao veloma an'i #Juan Gabriel tao amin'ny #BellasArtes i #Meksika, nandray azy kosa ireo goavana.
Noho izany, tao anatin'ny andro roa, teo amin'ny iray tapitrisa teo ireo olona nifamory teo akaikin'ilay ivontoerana manan-tantaran'ny Tanànan'i Meksika, mba ho afaka hanao veloma azy ary hanakaiky ny lavenon'ilay mpihira ankafiziny.
Asehon'ito lahatsary manaraka ito ny fanombohan'ilay lasa fanomezam-boninahitra olo-malaza nahitàna olona betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'i Meksika, hatreto:
Ny lova goavana navelan'i ‘El Divo de Juárez’
Mpihira, Mpanoratra hira, mpandrindra ary mpamokatra, miaraka amin'ny asa efa hatramin'ny 45 taona, vitan’ i Juan Gabriel ny lasa iray amin'ireo mpanakanto nahavita zavatra betsaka indrindra amin'ireo lahy sy vavy manan-danja amin'ny kolontsaina Latino-Amerikana: ny ranchera, ny bolero ary ny balady. Nohosorana ho asa vitany ny famoronana hira tsy latsaky ny 1.800, nataon'ireo mpanakanto 1.500 mahery manerana ny tany, ary nadika tamin'ny fiteny maro, tafiditra amin'izany ny teny Alemàna, Japoney, Grika, ary Papiamento.
Ho an'ny maro, karazana “mpiambina fihetsehampo” i Gabriel, ny feon'ny alahelo, fa feon'ny fankalazana ihany koa. Tamin'ireo hira ireo, vitany ny nanamontsana maro tamin'ireo varotra betsaka indrindra tsy voatanisa, ary lasa voalohany indrindra mpanao mozika mihetsika niseho tao Bellas Artes, toerana izay amin'ny ankapobeny natokana ho an'ny fampisehoana mozika milamindamina, opera na “ballet” (zavabita izay naverina indray tamin'ny taona 1997 raha nankalaza ny faha-25 taonan'ny naha mpanakanto azy izy, ary ny taona 2013, tamin'ny nahatratrarany ny faha-40 taonan'ny asany).
Fa ambadiky ny fahombiazany izay tsy iadian-kevitra, fantatra tamin'ny naha olo-malaza tian'olona azy i Juan Gabriel, izay nankahatra ireo fifanarahana napetraka amin'ny maha vavy sy lahy, fizaràna ara-tsokajy, ary fetra ara-tsosialy sy ara-koltoraly, tao amin'ny faritra izay mbola manjaka be ny tsy fitiavana olona mitia mitovy fananahana aminy, fanavahan-tsokajy ary fanavakavahana ara-pananahana.
Nankahatra ireo fitsaratsaram-poana tao Meksika i Juan Gabriel. Kintan'ny kanto izay ao amin'ny firenena mpitàna ny fomba hatrizay sy mpanome lanja bebe kokoa ny lehilahy, izay tsy hoe nampangiana ireo vahoaka fotsiny: nitondra azy ireo hihira koa.
Tsy fantatrareo mihitsy ny dikan'i Juan Gabriel ho an'ireo Meksikana. Indrindra ireo Meksikana pelaka. Manjelanjelatra, manan-talenta, ary zarazara. Olo-malaza. Olo-malazanay
Tany Venezoela ary tamin'ny vohikalan'ny media Pro Davinci, naka tamin'ilay fianoheran-kevitr'i Grabriela i Christina Rafalli, ary ny hoe ahoana no tena zava-dehibe tamin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ao Meksika izany, na tsy nambara nivantana aza ny fikatrohany:
Teraka izy, nitombo ary notiavina tao amin'ny firenena sy tanibe izay mbola nilikilihana ireo olona mitia olona mitovy fananahana aminy, iharan'ny herisetra ara-batana sy amin'ny teny, olona atao hoe adala, ihomehezana ary tsy hajaina amin'ny lafiny rehetra. Fa tsy izay ihany no fifanoherankevitra nampiray an'i Juan Gabriel. Nandeha tany amin'ny ivon'ny maizina indrindra amin'ny fanahin'ny Meksika izy, ary tany amin'izay namirapiratan'ny maha-lehilahy marary sy novaina endrika hampihomehy, noesoriny ny vato, ary tamin'ny lavenony mafana, namorona endrika tsy nampoizina sy mampangovitra izy: charro ilay lehilahy tia lehiahy.
Charro dia teny entina milaza olomalaza nentim-paharazana any Meksika, somary ampifandraisina amin'ny maha-lehilahy tafahoatra ny olona iray; azo oharina amin'ny cowboy, fa samihafa amin'ny fanamiana sy ny sata eny amin'ny fiarahamonina.
Avy tany Ekoatora, nandinika lalina ny fahatsiarovan-tenany ara-pihetseham-po sy araky ny endrika, izay niparitaka nanerana an'i Amerika Latina i Eduardo Varas:
Izay lehilahy lehibe izay (goavana foana no nahitàko azy), mora fanahy, izay nijaly tamin'ny fotoana rehetra, dia tsy mba nitsitsitsitsy nampahafantatra ny fombany. […] Nanadrohadro azy ny rehetra, nataontsika ampahan'ny tontolo androntsika izany noho ny fomba fihetsiny, noho ny zavatra asehony. “Tena mpihira nahay izy…fa tsy mba tiako mihitsy ny fombany”, hoy ny reko nolazain'ny olona ora vitsivitsy lasa izay. Maro no hahita faharesena ao anatin'io fehezanteny io, fa tsy izaho. Eto no fandresena lehibe indrindra amin'ny fankahalàna ireo mitia ny mitovy fananahana aminy tamin'ny taona 1980 izay noentin'i Juan Gabriel: tamin'ny fankatoavana azy, tamin'ny fampidirana azy ho ampahan'ny tontolo androntsika, na hoe tamin'ny alalan'ny hanihany sy fanompàna miafina aza no fomba nandraisana ny tantaram-pitiavany sy ny hajejoany. Fitaovana ihany ny olona iray, fa rehefa mbola manaiky sy mahafantatra ny hatsaràna izy – na lahy na vavy -, tsy very ny zava-drehetra.
Noharina tamin'ireo olo-malazan'ny mozika, toa an'i Elvis Presley na Frank Sinatra i ‘El Divo de Juárez’ ; kanefa, fantratr'ireo mpankafy azy tsara fa tsy ho afaka ampitahaina , ary mbola hitohy ho izany hatrany, amin'ny hafa mihitsy ny fahafehezany ny tononkira sy ny fisehoany an-tsehatra.